शिक्षक अभावमा शिक्षाको गुणस्तरमा कमी – इन्सेक
शिक्षक अभावमा शिक्षाको गुणस्तरमा कमी
रौतहट ०७६ चैत ७ गते
माधवनारायण नपा—८ रजवाडास्थित श्री प्रावि रजवाडामा आठ जना शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्नेमा हाल तीन जना मात्र कार्यरत रहेकोले शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
भनिन्छ–“बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर परिवार हो, भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय” विद्यालयमा पनि बालबालिकाको जग भनेको प्राथमिक तह नै हो । उक्त विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षाको स्थिति हेर्दा एक कोठामा कक्षा एक सञ्चालन हुन्छ, अर्को कोठामा कक्षा दूई र तीन सञ्चालन हुन्छ र अर्को कोेठामा चार र पाँच सञ्चालन हुन्छ ।
“बालबालिकालाई शिक्षक अभावले गर्दा बहुकक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । ३ सय ९३ जना विद्यार्थीलाई जम्मा तीन जना शिक्षकले व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिनाई परेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको बताउनु हुन्छ”–निमित्त प्रध्यानाध्यापक श्री भुजेन्द्रप्रसाद यादव ।
त्यस्तै राहत शिक्षक जयमङ्गल प्रसाद कुश्वाहा भन्नु हुन्छ–“दुई ओटा कक्षा एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्दा आधा घण्टी एउटा कक्षाको विषय पढाउने र अर्को आधा समय अर्को विषयलाई दिने गरेका छौँ । यसले गर्दा शिक्षण विधि प्रयोग गर्न समय नहुने र विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकोले भाषण विधि प्रयोग गर्छाँै जुन विधिमा बालबालिकाले रुचि देखाउँदैनन् ।”
कक्षा पाँचमा अध्ययनरत छात्र निवास साह भन्नु हुन्छ—“एउटा कोठामा दूई ओटा कक्षाको विद्यार्थी राख्दा आधा आधा समय दिनुहुन्छ सरहरूले र पुरा सयम पढ्न पाइदैन । एउटै कक्षामा विद्यार्थी भित्र नअटाएर जुनसुकै मौसममा बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ र वर्षायाममा भित्र बस्दा बस्ने ठाउँ नभएर उभिएर पढ्न पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा विद्यालय आउने जाने मात्र भएको छ । हामीले सिक्नुपर्ने ज्ञान प्रभावकारी रुपमा हाँसिल भएको छैन ।”
अभिभावक दिमङ्गल राय यादव भन्नुहुन्छ–“आठ जनामा जम्मा तीन जना शिक्षक छन् । त्यसमा पनि विरामी तथा भैपरी बिदामा शिक्षकहरु पालैपालो बस्दा दुई जनाले लगभग ४ सय जना विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी नहुने बताउनु भयो ।”
यस विषयमा माधवनारायण नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहसँग कुराकानी गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ–“यस आ.व. मा १ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट भवन निर्माणको लागि छुट्याइएको र आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई व्यवस्थित पार्ने बताउनु भयो ।”
त्यस्तै माधवनारायण नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख प्रलव कायस्थसँग कुराकानी गर्दा आगामी योजनामा प्राथमिकता दिई शिक्षक परिपुर्ति लगायत भवन निर्माणमा बजेट राख्ने बताउनु भयो ।